Filohan’ny Ceni : “Manapaka ny fanaovana fifidianana ny fitondrana” | NewsMada
Filohan’ny Ceni : “Manapaka ny fanaovana fifidianana ny fitondrana”
Nitondra fanazavana ny amin’ny hiatrehana ny fifidianana, indrindra ny fifidianam-paritra ny eo anivon’ny Ceni. Nambaran’izy ireo fa tompon’andraikitra voalohany amin’izany ny fanjakana.
“Tsy avy aty amin’ny Ceni ny fanapahanna momba ny fanaovana fifidianana, fa any amin’ny fitondram-panjakana izay zavatra izay.” Tenin’ny filohan’ny Ceni, Rakotomanana Hery, teny Anosy, ny faran’ny herinandro teo, io, manoloana ny resaka mandeha fa mifanilika andraikitra ny governemanta sy ny Ceni amin’ny fanatanterahana ny fifidianam-paritra kasaina hatao amin’ny volana jona.
Rehefa manapa-kevitra ny fitondram-panjakana hoe hanao fifidianana, alefan’ny Ceni amin’izay ny tolo-kevitra isan-tokony hahafahana manatanteraka ny fifidianana, araka ny fanazavany. Rehefa misy, ohatra, ny fanapahan-kevitra hoe hanao ny fifidianana, ny anjara andraikitry ny Ceni: manome tolo-kevitra amin’izay hahafahana manatanteraka izany fifidianana izany.
Misy tolo-kevitra aloha izany avy amin’ny governemanta hoe hanao fifidianana isika amin’ity taona ity, ohatra. Eo amin’izay, manolotra tolo-kevitra ny Ceni hahazoana manatontosa izany, ary miroso amin’ny fanatanterahana.
Mila resy lahatra sy vonona ny fitondram-panjakana
Nilaza ny Praminisitra Ravelonarivo taorian’ny fihaonan’ny governementa malagasy sy ny Vondrona eoropeanina teny Ankorondrano, ny 10 febroary, fa hatao amin’ny volana jona ny fifidianam-paritra. Zakan’ny fanjakana malagasy ny fanatanterahana izany, fa tsy mila fangataham-bola any ivelany.
Araka izany, tsy olana izay manapaka ny tetiandrom-pifidianana, fa ny amin’io fifidianam-paritra io: tena vonona sy resy lahatra amin’izay ve ny fitondram-panjakana sa voatery noho ny fihaonana tamin’ireo mpiara-miombon’antoka? Mety mahatonga ny fandrirarirana na amboletra izay… Eo hatrany ny paipaika sy kajikajy politika?